Prof. U Ko Ko – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
Prof. U Ko Ko
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေ ရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)
Posts By Prof. U Ko Ko
ဆီးချို၊ သွေးတိုး စတဲ့ ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဘာကြောင့်အဖြစ်များရသလဲ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေက အဓိကအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ (Healthy Lifestyle) မရှိလို့ ဖြစ်ရတာပါ။...
အိမ်မှာ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတဲ့အခါ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သွေးပေါင်က ဆေးခန်းမှာတိုင်းတာနဲ့ အိမ်မှာတိုင်းတာ အပြောင်းအလဲရှိတော့ ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဆိုရင် သွေးတိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလဲ။ A. သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ သွေးပေါင်က ၁၄၀/၉၀ mmHg နဲ့ အထက်ရှိရင် သွေးတိုးတယ်လို့...
သွေးတွင်းအဆီများခြင်းကို နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံဖြင့် လျှော့ချနည်း
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. သွေးတွင်းအဆီမများအောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. သွေးတွင်းအဆီဓာတ် မများဖို့အတွက် ရှောင်ရမယ့် အစားအသောက်မှာတော့ အဓိကက ၀က်ဆီ၊ အမဲဆီ၊ စားအုန်းဆီကို ရှောင်ရပါမယ်။...
ကိုယ်ခံအားစနစ် မြင့်တက်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခုခံနိုင်စွမ်းရှိအောင်
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းရတာက အကြောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ (၁) ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းတာနဲ့ (၂) အလုပ်များပြီး အစာကောင်းကောင်းမစား၊ အနားမယူတာကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့...
အိပ်စက်မှုအတွက် အရေးပါသည့် မယ်လတိုနင်
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. မယ်လတိုနင်အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. မယ်လတိုနင်ဆိုတာ ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ ပိုင်နီရယ်ဂလင်း (Pineal Gland) ကနေ ထွက်ရှိတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နေ၀င်ပြီး...
အပူရှပ်ပြီး အဖျားကြီးတဲ့အခါ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. အပူရှပ်ပြီး အဖျားကြီးတဲ့အခါ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ KK (FB) A. လူတွေက အဖျားတက်တယ်ဆိုရင် အဖျားကျအောင် စောင်တွေခြုံပြီး နေတတ်ကြပါတယ်။ စောင်တွေထပ်ခြုံလေလေ၊ ခန္ဓာကိုယ်က...
မ၀အောင် ကြိုတင်ထိန်းထားလို့ ရပါသလား . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မ၀သေးတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ရော ၀မလာအောင် ဘယ်လိုသတိထားသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ TTH(FB) A. မ၀သေးတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အလေးချိန်နဲ့ ကိုယ့်ခါးကို အမြဲတိုင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်က မတက်အောင် ထိန်းရတာက ပိုလွယ်ပါတယ်။...
ဆီးချိုရှိသူများ ဘီယာဝိုင်းထိုင်မယ်ဆိုရင် . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရှိသူတစ်ဦးက ဘီယာဝိုင်းမှာ ထိုင်တဲ့အခါ အယ်လ်ကိုဟောကို ဘယ်လောက်ပမာဏ သောက်လို့ရပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတွေ အရက်သောက်လို့ရလားဆိုပြီး ခဏခဏ မေးကြပါတယ်။ မသောက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။...
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. သွေးတွင်းအဆီများ၊ မများသိဖို့ ဘယ်လိုတိုင်းတာနည်းတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. သွေးတွင်းအဆီများတာကို သိဖို့က သွေးဖောက်စစ်မှ သိနိုင်ပါတယ်။ သွေးဖောက်စစ်တဲ့နေရာမှာ Fasting ကို စစ်မှရပါတယ်။...
မျိုးရိုးမရှိဘဲ ဘာကြောင့် အ၀လွန်ရတာလဲ
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. တချို့လူတွေက မျိုးရိုးထဲမှာ ၀တဲ့သူမပါဘဲ တစ်ယောက်တည်း ၀နေကြပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ A. အ၀လွန်တာဟာ မျိုးရိုးဗီဇမရှိဘဲ အ၀လွန်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ရောဂါတွေက...